बागमतीमा माछा पाउन छाडेपछि रहनसहन मै परिवर्तन « Everestweek – Nepal's Popular Digital NewsPaper
१४ चैत्र २०७५, बिहीबार ०७:५०
हेटौँडा , १४ चैत/ माछा लिनुस्, माछा ! बागमतीको माछा ! आफूलाई फापरबारीको बताउने एक व्यक्ति हेटौँडाको महोत्सव परिसरमा सिलमा उनेको माछा बेच्दै थिए । “साँच्चै बागमती कै हो ?,” एक महिलाले शङ्का व्यक्त गरिन् । कसम खान नपर्ने अवस्था बनाउँदै व्यापारीले चलाखी गरे – “बागमतीकै हो । बागमती त सुकेको गुलाफ जस्तै भयो । सधैं लटरम्म फुल्ने गुलाफ सुकेपछि कस्तो देखिन्छ हो, त्यस्तै भयो बागमती ।” उनले लाक्षणिक रुपमा कुरा प्रष्ट पार्ने चेष्टा गरे । निक्कै नै साहित्यिक भाषा प्रयोग गरेर बोल्ने त्यस व्यापारीले आफ्नो परिचय दिन मानेनन् ।
“तिर्खा लागेको भए खोलातिर जानुहोस्,” उनले माछाको खानी मानिने राई गाउँतिरै जान सुझाउँदै थपे पनि । मकवानपुरको राई गाउँ करौंजेका प्रायःजसो घरमा माछा मार्ने जाल, ढडिया, खोंगा, तीर, बल्छी भेटिन्छन् । तर, ती सामान हेर्दा लाग्छ लामो समयदेखि तिनले आफ्नो काम गर्न पाएका छैनन् । यस भेगमा विगतमा व्यावसायिक रुपमा माछा मार्ने र बेच्ने चलन थियो । यहाँको माछा सुकाएर काठमाडाँैं तथा हेटौँडा लगायत देशका थुप्रै शहरहरुमा पुग्थे । माछा बाहेकको तरकारी नै नहुने चलन करौंजेमा थियो । एकल तथा समूहमा पनि माछा मार्ने चलन थियो । तराईबाट मलाहहरु महिनौं बस्ने गरी आउँथे र महाजाल तथा ठूल्ठूला झुलहरुको प्रयोग गरेर माछा मार्थे । महिनौं राई गाउँमा बसेर सिद्रा लिएर जान्थे । हेटौँडातिरका माछा व्यापारीहरुको आउजाउ पनि बाक्लै हुन्थ्यो ।
राई गाउँमा २० वर्ष बसेका ९८ वर्षीय उमाकान्त आचार्य आफू शाकाहारी भए पनि राई गाउँले माछा खान सिकाएको बताउँछन् । आलु, प्याज, सागसब्जी केही पनि नलगाउने करौंजेमा दुई बाली अन्न बाहेक केही हुन्नथ्यो । एकपटक मकै अनि, धान वा कोदो, त्यो बाहेक कसैले केही पनि नलगाउने चलन थियो । कसै कसैले तोरी र गहुँ पनि लगाउँथे तर, थोरै । तेल र बेसारको समेत प्रयोग नगरी माछाको स्वादिष्ट परिकार बनाउने कला थियो त्यहाँ । आचार्यले भने – “गाई पाल्ने तर, मल र गोरुका लागि । दूध दुहुने र खाने चलन थिएन । हामी सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीबाट बसाइँ सरेर आएका दुई तीन घरले दूध दुहुन र दूध दही खान शुरु ग¥या हौं ।”
तीन–चार वर्ष अगाडिसम्म पनि प्रशस्त माछा पाइने बागमती नदीमा किन माछा पाइन छाड्यो त ? वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौँंडाका क्याम्पस प्रमुख प्रा कृष्णप्रसाद दाहाल प्रदूषण नै प्रमुख कारण हुनसक्ने बताउँछन् । खेतबारीमा प्रयोग गर्ने विषादीहरु बगेर नदीमा पुग्छ । अस्पताल, कलकारखानाका रसायनजन्य फोहरमैला बगेर नदीमै जान्छ, ती पनि कारण हुन सक्छन् । माछा मार्न विषादीको प्रयोग अर्को कारण हुन सक्छ । वर्षात् तथा डढेलोको खरानीको भेल नदीमा पसे पनि जलचरलाई असर गर्ने उनको तर्क छ । हेटौँडामै पनि हिउँदे भेलका कारण माछा मरेको पाइएको उनले बताए तर, बागमती नदीको सवालमा किसानले बालीमा प्रयोग गर्ने विषादी नै प्रमुख कारण हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ । उनले भने – “मकवानपुर, ललितपुर र सिन्धुलीका किसानले प्रयोग गरेको विषादी स्थानीय खहरे खोल्सा हँुदै नदीमा पुगेर जलचरलाई प्रभावित पारेको हुन सक्छ ।” यो पूरै देशको समस्या हो । समयमै नसोचे जैविक सन्तुलनमै समस्या उत्पन्न हुने र त्यसले विकराल समस्या निम्त्याउन सक्ने वातावरणविद्हरु औँल्याउँछन् । (रासस) ः